စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 20/03/2020)
မြူးနစ်, Bavaria မြို့တော်, ရာစုနှစ်များစွာအရွယ်အဆောက်အအုံများမှနေရာဖြစ်သည်နဲ့ မြောက်မြားစွာပြတိုက်. အဆိုပါမြို့က၎င်း၏နှစ်ပတ်လည် Oktoberfest အခမ်းအနားနှင့်၎င်း၏ဘီယာခန်းမများအတွက်လူသိများသည်, အဆိုပါကျော်ကြားတဲ့ Hofbrauhaus အပါအဝင်, ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1589. အဆိုပါ Altstadt အတွက် (မြို့ဟောင်း), အလယ်ပိုင်း Marienplatz စတုရန်းထိုကဲ့သို့သော Neo-Gothic အဘိဓါန် Neues Rathaus အဖြစ်အထင်ကရအဆောက်အပါရှိသည် (မြို့တော်ခန်းမ), 16 ရာစုကနေပုံပြင်များ chimes နှင့် reenacts တဲ့လူကြိုက်များတဲ့ glockenspiel ပြပွဲနှင့်အတူ.
ခိုင်ခံ့သောဘီယာပွဲတော်ဘီယာဥယျာဉ်နှင့် Oktoberfest တူသောမြူးနစ်ပိုင်. တကယ်တော့, ဒီဘီယာပွဲတော်မြို့တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးထားရှိမည်လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,. ဒါဟာအမှန်တကယ် Oktoberfest ထက်ပင်အဟောင်းတွေရဲ့, အလယ်ပိုင်း 1600 ရဲ့စတင်ခဲ့သည်, မြူးနစ်ရဲ့ Paulaner သံဃာတော်များနှင့် Paulaner Nockherberg အားဖြင့်မြူးနစ်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဘီယာပွဲတော်များအတွက်မူရင်းနေရာဖြစ်ပါသည်!
အမှုအရာတက် Sum မှ: starkbier အားကြီးသောဘီယာဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်အရက်အကြောင်းအရာအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းဖျက်သိမ်းစိုင်အခဲအတွက်အားကောင်းင်, သင်ထသင်တက်ဖြည့်ပါနှင့်ရှုပ်ထွေးပါလိမ့်မယ်. သငျသညျသတိပေးခဲ့သည်ပြီ!
အဓိကစူပါမားကတ်ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်စျေးဝယ်နေစဉ် ဆိုင်များတွင်သင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုလက်ခံရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်, မြူးနစ်အတွက်အများဆုံးစားသောက်ဆိုင်နှင့်စတိုးမှသာငွေသားသို့မဟုတ် EC-ကတ်များကိုလက်ခံပါလိမ့်မယ် (ဒက်ဘစ်ကဒ်နဲ့တူရာများမှာ). သငျသညျနေ့စဉျအသုံးပြုမှုများအတွက်သင်နှင့်အတူအလုံအလောက်ယူရိုရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ.
မြူးနစ်မှရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်ချင်? ထိုအခါမှကိုကျော်ပေါ်ဦး SaveATrain သငျသညျအဘယ်သူမျှမ peaky နှင့်အတူမိနစ်၌သင်တို့၏လက်မှတ်ရလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ, အပိုဆောင်းနှင့်ဝှက်ထားသောအဖိုးအခ!
#Beerfestival #NockherbergStarkbierfest #ခိုင်မာတဲ့ဘီယာစေးထွက်ရှိ #TraveltoMunich ဝက်ဝံခရီးသွား သောက်စရာပွဲတော် မြူးနစ်